Indawo kawonke-wonke-ukukhanya - i-Conssin Lighting Co., Ltd.
Indawo yoluntu Ukukhanya kwe-LED
Izibane ze-Conssin ze-LED ukuphucula ukhuseleko ngesixhobo esenzelwe ukukhanyisa iindawo zikawonke-wonke ezimnyama, iindlela zokuhamba, iindawo zokuphuma nezokungena.
Iimveliso ezakhelwe ukusinda kwiindawo ezinganyamezelekiyo.
Izibane ze-Conssin Lighting izibane ze-LED ziyaphuhliswa kwaye ziyilelwe ukuba zisetyenziselwe naluphi na uhlobo lokuguquguquka koyilo, ngelixa zibonelela ngokulondolozwa okukhulu ekusebenziseni amandla.
Izibane zethu ze-LED ziyilelwe ukwenza kunye nokuqaqambisa imilo yoyilo kunye noyilo lwezicelo ezahlukeneyo. Zihlala zisetyenziselwa ukwenza ulwandlalo lokwakha okanye ukwenza amanqaku aphezulu ezinto ezikhethiweyo. Uluhlu lwethu lokukhanya kwe-LED luza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nemibala, ivumela uyilo olunesibindi kunye neempawu zokuyila.
Yenzelwe ukufakelwa okutsha kunye nokufakwa lula kwi-HID cobra-style fixtures, izindlu zethu ze-aluminium zezindlu eziphezulu kunye nokuqina okuphezulu komgubo we-powder kubonelela ngokusebenza okuphezulu kunye nokuphila ixesha elide kuyo nayiphi na imeko.
Funda ngakumbi malunga ne-MPG1
Funda ngakumbi malunga ne-MPG2
Funda nzulu malunga neSMS1
Uyilo lwezibane ze-Conssin ze-LED zokukhanyisa indawo zilungile ekudaleni ukukhanya okukhulu kweendawo zokupaka, iindlela zokuhamba, ukuthengisa ngokuzenzekelayo, iinkundla zemidlalo kunye neendawo zokudlala.
Indawo yezibane ze-LED ziqala ukusuka kwi-watts ezingama-30 ukuya kwi-1000watts ngokuhanjiswa okukhanya okwahlukeneyo. Yonke indawo yethu yokukhanyisa ngaphandle ye-LED inewaranti eyi-5year.
Indawo yokuKhanya kweNdawo ye-Conssin ihambisa amandla akhokelela ekwenziweni kwamandla, ukusebenza kunye nokuxhomekeka kwintsebenzo ephezulu kuluhlu olubanzi lwezicelo kwezona ndawo zinzima.
Ngokukodwa yakha ukuze ilungele ukusetyenziswa kwesibane sendawo MPG1 kunye ne-MPG2 uthotho lubonelela ngezibane ezingakhange zigcinwe onokuthembela kuzo ngokubonakalayo okungenakuthelekiswa nanto ukonga okuphezulu kunye nokhuseleko.
Ukukhanya kwesitalato se-LED.
Ngomhla we-13 kuMeyi 2014
Umbane we-Conssin Umbane wamva nje we-LED kwimarike yitrato eyintloko yesitalato ngokuyila ngokukodwa kwisicelo sikarhulumente wasekhaya e-Australia.
Uluhlu lwe-SMS ye-LED yokufakelwa kokukhanya kubandakanya umgangatho osemva nje osetyenziswayo e-USA nase-Australia kwizibane zikawonke-wonke. Iziphumo zoluhlu zenza i-20 Watts yoyilo lokukhanyisa esidlangalaleni ezitalatweni kunye neendlela kwi-120 Watts yoyilo lweendlela, iindlela ezimbini zokuhamba.
Sisebenzisa itekhnoloji yakutshanje yemithombo ye-Cree ye-LED enomdla nge-135L / W, umqhubi wePhillips onamandla anciphayo kunye nolawulo lokuchukumisa isixeko. Uyilo lweqokobhe elilodwa elinomzimba wealuminiyam okhutshiweyo vumela ulondolozo oluhlala ixesha elide simahla.
Uyilo loyilo - izibane ezitratweni
Sicebisa olu khetho kwiiprojekthi zikarhulumente kunye nomhlaba ophethwe ngurhulumente njenge: iindlela, oohola bendlela, iibhulorho, iipaka zemoto nezinye izibonelelo.
Indawo yoluntu Iinkqubo zokukhanyisa i-LED onokuzithemba.
Izibane zeTower Tower, Ukukhanya kwezibane eziPhakamileyo, Izibane eziKhokelwayo Solar, Izibane eziPhakamileyo eziPhakamileyo, Izibane zeNkundla yeZemidlalo zangaphandle, Ukukhanya kwendawo ye-LED,